Imibiko Yonyaka - Isisekelo Somvuzo - uthando, Ubulili ne-Intanethi
Ikhaya Imibiko yonyaka
I-Reward Foundation yasungulwa njenge-Scottish Charitable Incorporated Organization ku-23 Juni 2014. Sibhalisiwe nge-charity SC044948 neHhovisi le-Scottish Charity Regulator, i-OSCR. Isikhathi sethu sokubika ngezezimali siqala kusukela ngoJulayi kuya kuJuni unyaka ngamunye. Kuleli khasi sishicilela okubhaliwe koMbiko Wonyaka wonyaka ngamunye. I-akhawuthi ephelele yamuva yama-akhawunti iyatholakala ku- Iwebhusayithi ye-OSCR ngendlela eguquguqukayo.
Umbiko wonyaka ka-2019-20
Umsebenzi wethu ubugxile ezindaweni eziningana:
Ukwenza ngcono ukusebenza kwezezimali ngokusiza ngokufaka izicelo zezibonelelo nokusungula izindawo ezintsha zokuhweba kwezebhizinisi.
Ukuthuthukisa ubudlelwano nabangase basebenzisane nabo eScotland nasemhlabeni jikelele ngezinethiwekhi.
Ukunweba uhlelo lwethu lokufundisa ezikoleni sisebenzisa imodeli yesayensi yemijikelezo yomvuzo wobuchopho nokuthi ihlangana kanjani nemvelo.
Ukwakha iphrofayili kazwelonke neyamazwe omhlaba ukwenza i-TRF inhlangano ethembekile 'yokuya' kubantu nezinhlangano ezidinga ukwesekwa emkhakheni wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi zilimaze njengendlela yokuqhubela phambili ukuqonda komphakathi ngokwakha ukuqina kwengcindezi.
Ukuqala ushintsho ukukhulisa ukufinyelela kwethu nomthelela ngokuhambisa kancane kancane ukugxila kwezinsizakalo zethu. Sisuka kumodeli yokulethwa ubuso nobuso siye kumodeli sisebenzisa ubuchwepheshe besimanje bezokuxhumana.
Ukunweba ubukhona bethu bewebhu kanye nabezenhlalo ukwakha umkhiqizo wethu phakathi kwezithameli eScotland nasemhlabeni jikelele.
Ukwenza imisebenzi yokuqeqesha nentuthuko ukukhulisa amazinga ekhono leqembu le-TRF. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi bayakwazi ukuletha le mifudlana yokusebenza ehlukahlukene.
Siphinde saphindaphinda kabili imali yethu engenile yaya ku- £ 124,066 entsha. Sithole uchungechunge lwezibonelelo zamasu, kufaka phakathi enkulu kunazo zonke kuze kube manje.
I-TRF igcine ukutholakala kwayo esidlangalaleni kwezemfundo yezocansi, ukuvikelwa kwe-inthanethi nezinsimu zokuqwashisa ngocansi, ukuya ezingqungqutheleni ze-7 nemicimbi eScotland (ngonyaka owedlule 10), 2 eNgilandi (ngonyaka owedlule 5), kanye neyodwa e-USA.
Phakathi nonyaka sisebenze nabantu abangaphezu kwama-775 (ngonyaka odlule i-1,830) mathupha. Silethe cishe amahora angu-1,736 wokuxhumana / namahora wokuxhumana nokuqeqeshwa, kwehle kancane kusuka emahoreni angonyaka odlule we-2,000.
Kusukela ngoMashi 2020 Imisebenzi yeReward Foundation yehliswe noma yashintshwa yilo bhubhane. Isimemo sokukhuluma engqungqutheleni yabahlengikazi ngodlame lwasekhaya eSweden sakhanselwa. Okunye ukuzibandakanya okuningi kokukhuluma nokufundisa nakho kulahlekile.
Imali engenayo yokuhweba yacindezelwa yilo bhubhane, yize lokhu kwanxeshezelwa ngoxhaso oluvela kuHulumeni waseScotland weSithathu Sector Resilience Fund.
Ngezinsuku ezintathu ngoJuni 2020 saqhuba ingqungquthela yokuqala yomhlaba yobudala yokuqinisekisa ubudala obuhanjelwe izithunywa eziyi-160 ezivela emazweni angama-29. Lokhu ekuqaleni bekuhlelwe njengomcimbi wobuso nobuso futhi bekufanele kubunjwe kabusha ngenxa yemikhawulo yeCovid.
Kuwebhusayithi yethu www.rewardfoundation.org, inani lezivakashi eziyingqayizivele lenyuka laya ku-175,774 (ngonyaka owedlule 57,274) futhi inani lamakhasi abukiwe lifinyelele kuma-323,765 (kusuka ku-168,600).
Ku-Twitter kusukela ngoJulayi 2019 kuya kuJuni 2020 sithole ukuvela kwama-tweet ayi-161,000, kwehle kancane kusuka ku-195,000 ngonyaka owedlule.
Esiteshini sethu se-YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC1-mihcAj9mf-nJKLWiT5KAinani eliphelele lokubukwa kwamavidiyo lenyuke lisuka ku-3,199 ngo-2018-19 laya ku-9,929. Ukuthuthuka okukhulu kuqhamuke kwisiqeshana esisinikeze ilayisense esivela eNew Zealand lapho uDkt Don Hilton echaza umthelela wezocansi ebuchosheni.
Ngonyaka sishicilele okuthunyelwe kwebhulogi kwe-14 okubandakanya imisebenzi ye-TRF nezindaba zakamuva mayelana nomthelela wezithombe zocansi ze-intanethi emphakathini. Sibe nezindatshana ezimbili ezishicilelwe kumajenali abuyekezwe ngontanga, kusuka kowangonyaka odlule.
Phakathi nonyaka i-TRF iqhubekile nokuvela kwabezindaba, yavela ezindabeni zamaphephandaba ze-5 e-UK nakwamanye amazwe (ngonyaka owedlule i-12). Sikhonjwe kwinhlolokhono eyodwa yomsakazo (kwehle kusuka ku-6) futhi sathola izindaba ezinkulu zamanje kwiThe Nine ku-BBC Scotland TV.
UMary Sharpe waqeda indima yakhe njengosihlalo wePomidi Lezobudlelwano Nomphakathi kanye ne-Advocacy Committee eSociety for the Advancement of Sexual Health (SASH) e-USA. Isikhathi sakhe seminyaka emine njengelungu leBhodi le-SASH naso saphela.
Kusukela ngoJanuwari 2020 kuya kuMeyi 2020 uMary Sharpe wayeyisazi Sokuvakasha eLucy Cavendish College, eNyuvesi yaseCambridge.
I-Reward Foundation inikele ngempendulo kunqubo yokwakha Ucwaningo Lukazwelonke Lwezimo Zezocansi Nezindlela Zokuphila Ucwaningo lwe-NATSAL-4.
Ngonyaka wesithathu siqhubeka sigcine iRoyal College of General Practitioners Accreditation yethula izifundo zosuku olulodwa kochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo njengengxenye yezinhlelo zabo ze-Continuing Professional Development. Izingxoxo ze-CPD zilethwe emadolobheni e-9 UK (kusuka ku-5) kanye kanye eRepublic of Ireland. Eminye imihlangano yokufundisana emibili ye-CPD yethulwe kochwepheshe base-USA.
I-TRF iqhubeke nokuletha izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi zilimaza ukuqeqeshwa kokuqwashisa ezikoleni, kochwepheshe kanye nasemphakathini jikelele. Uhlelo lokwakha izinhlelo zezifundo ezithombeni ezingcolile kanye nokuthumelelana imiyalezo yocansi ezosetshenziswa ezikoleni ludlulele ezigabeni zalo zokugcina, nokulingwa ezikoleni eziningana. Izinhlelo zokuqala zezifundo zaqala ukuthengiswa esitolo se-TES.com ekupheleni konyaka.
Izakhiwo nezinkonzo ezinikeziwe
Sinikele ngamahora angama-597 wokuqeqeshwa kwamahhala kubantu abayi-319. Lokhu bekukukhulu kakhulu kunenani lonyaka odlule lamahora angama-230, yize inani labamukeli lehle lisuka kubantu abangama-453. Ushintsho lukhombisa ushintsho oluxhumene phakathi kwesisa. Okokuqala, sikwazile ukukhokhisa olunye uqeqesho olunikezwa ochwepheshe nezikole, ngakho-ke sithuthukisa ukuhamba kwemali kwethu. Sikwazile ukwenza lokhu, okungenani ngokwengxenye, ngoba izinto ebezithuthukiswa ngonyaka owedlule manje sezizanyiwe futhi zahlolwa, okwazenza zaba yimikhiqizo esebenza ngokuhweba.
Okwesibili, sandise inani lemininingwane yamahhala esatshalaliswa ngokukhula kwethu okukhulu kuzethameli ezafinyelelwa eScotland nasemhlabeni yiwebhusayithi yethu nangemithombo yezokuxhumana. INgqungquthela ye-Age Verification Virtual iphumelele kakhulu ukusivumela ukuthi sifinyelele izethameli ezintsha.
Sibe namaphepha abuyekezwe ngontanga ashicilelwe ku- 'Ijenali Yomhlaba Wonke Yocwaningo Lwezemvelo Nempilo Yomphakathi' futhi 'Ukuhlukumeza ngokocansi nokuphoqelela '. La maphepha anamandla okusiza ekuqondiseni ucwaningo lwezithombe zocansi emhlabeni wonke kule minyaka eyishumi ezayo. Umhlahlandlela Wabazali Bamahhala Wezithombe Zobulili Ezingcolile ze-Intanethi owethulwe ngo-2018-19 ukhule kusuka kumakhasi ama-4 kuya kwayi-8, ukuthola imininingwane eyengeziwe ebaluleke ezandleni zabazali abasebenza ngezimo ezicindezelayo nezingane zabo.
Umbiko wonyaka ka-2018-19
Umsebenzi wethu wawugxile ezindaweni eziningana
Ukwenza ngcono ukusebenza kwezezimali ngokufaka izicelo zezibonelelo kanye nokwandisa ukuhweba kwezebhizinisi
Ukuthuthukisa ubudlelwane nabasebenzi abangaba khona eScotland nasemhlabeni wonke ngokusebenzisa ukuxhumana
Ukwandisa uhlelo lwethu lokufundisa ezikoleni besebenzisa imodeli yesayensi yomjikelezo wesifunda sobuchopho nokuthi uxhumana kanjani nemvelo
Ukwakha iphrofayli kazwelonke nangamazwe omhlaba ukwenza i-TRF ibe 'inhlangano' yokuthembeka yabantu nabantu nezinhlangano ezidinga ukwesekwa emkhakheni wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi zilimaza njengendlela yokuthuthukisa ukuqonda komphakathi ukwakha ukuqina kokucindezeleka
Ukwandisa ukuxhumana kwethu kwewebhu nakwezenhlalo ukwakha umkhiqizo wethu phakathi kwezilaleli eScotland nasemhlabeni jikelele
Ukwenza imisebenzi yokuqeqesha nentuthuko ukukhulisa amazinga ekhono leqembu le-TRF ukuqinisekisa ukuthi bayakwazi ukuletha le mifudlana yokusebenza ehlukahlukene.
Siphinde kabili imali yethu engenile yaba ngaphezu kwe- £ 62,000, sathola isibonelelo sethu esikhulu kunazo zonke esake saqhubeka nokukhulisa imali yethu yokuhweba.
Siqede isibonelelo 'sokutshala imali emibonweni' esikhwameni seBig Lottery Fund. Lokhu kusetshenziselwe ukuthuthukisa nokuhlola izinto zekharikhulamu ezisetshenziswa othisha bamabanga aphansi naphezulu ezikoleni zikahulumeni. Silindele ukuthi lokhu kuzoqala ukuthengiswa okujwayelekile kusuka ekupheleni kuka-2019.
I-TRF igcine ukutholakala kwayo kwezemfundo yezocansi, ukuvikelwa kwe-inthanethi nezinsimu zokuqwashisa ngokocansi, ukuya ezingqungqutheleni nasemicimbini eyi-10 eScotland (ngonyaka owedlule 12). ENgilandi kwakungu-5 (unyaka owedlule 3), kanye noyedwa ngamunye e-USA, eHungary naseJapan.
Phakathi nonyaka sisebenze nabantu abangaphezu kuka-1,830 3,500 (ngonyaka odlule abangu-2,000 2,920) mathupha. Silethe cishe amahora angama-XNUMX XNUMX abantu / amahora wokuxhumana nokuqeqeshwa, kwehle kusuka ku-XNUMX.
Ku-Twitter kusukela ngoJulayi 2018 kuya kuJuni 2019 sithole ukuvela kwama-tweet ayi-195,000. Lokhu kukhuphuke kusuka ku-174,600 ngonyaka owedlule.
NgoJuni 2018 sifake i-GTranslate kuwebhusayithi, sinikeza ukufinyelela okugcwele kokuqukethwe kwethu ngezilimi eziyi-100 ngokuhumusha komshini. Izivakashi ezingezona isiNgisi manje zenza cishe u-20% womgwaqo wethu wewebhu. Sifinyelela izethameli ezibanzi eSomalia, India, Ethiopia, Turkey naseSri Lanka.
Ngonyaka sishicilele okuthunyelwe kwama-blog angama-34 okuhlanganisa imisebenzi ye-TRF nezindaba zakamuva mayelana nomthelela wezithombe zocansi ze-intanethi emphakathini. Lokhu bekukodwa ngaphezu konyaka odlule. Sibe nendatshana eyodwa eshicilelwe kumagazini obuyekezwe ngontanga.
Phakathi nonyaka i-TRF iqhubekile nokuvela kwabezindaba, yavela ezindabeni zamaphephandaba e-12 e-UK nakwamanye amazwe (ngonyaka owedlule wama-21) kanye naku-BBC Alba eScotland. Siveze izingxoxo eziyisithupha zomsakazo (kusuka ku-6) sathola nesikweletu sokukhiqiza kudokhumentari ye-TV ebudlelwaneni bentsha.
UMary Sharpe uqhubeke nomsebenzi wakhe njengosihlalo weKomidi Lezobudlelwano Bomphakathi kanye ne-Advocacy ku-Society for the Development of Health Health (SASH) e-USA. Ngo-2018 uMary waqokwa njengenye ye I-WISE100 abaholi besifazane emabhizinisini omphakathi.
I-Reward Foundation inikele ekuphenduleni embuzweni weKomidi Elikhethiwe Wekomidi mayelana nokukhula kwe-Immersive and Addictive Technologies. EScotland sinikele eMkhandlwini Kazwelonke Wokweluleka Kwabesifazane Namantombazane kuNgqongqoshe Wokuqala ngezixhumanisi eziphakathi kokuhlukunyezwa ngokocansi nokusetshenziswa kwezithombe zocansi.
Sigcine iRoyal College of General Practitioners Accreditation yethula izifundo zosuku olulodwa kochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo njengengxenye yezinhlelo zabo ze-Continuing Professional Development. Izingxoxo ze-CPD zilethwe emadolobheni ama-5 UK (kusuka ku-4) futhi kabili eRiphabhulikhi yase-Ireland. Eminye imihlangano yokufundisana emibili ye-CPD yethulwe kochwepheshe base-USA.
I-TRF yaqhubeka nokuletha izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ezilimaza ukuqeqesha ukuqwashisa ezikoleni, ochwepheshe kanye nomphakathi jikelele.
Sinikele ngamahora angama-230 wokuqeqeshwa kwamahhala kubantu abayi-453. Lokhu bekuphansi kakhulu kunonyaka ophelele wamahora ayi-1,120. Ushintsho lukhombisa ushintsho oluxhumene phakathi kwesisa. Okokuqala, sikwazile ukukhokhisa olunye uqeqesho olunikezwa ochwepheshe, ngakho-ke sithuthukisa ukuhamba kwemali kwethu. Sikwazile ukwenza lokhu, okungenani ngokwengxenye, ngoba izinto ebezithuthukiswa ngonyaka owedlule manje sezizanyiwe futhi zahlolwa, okwazenza zaba yimikhiqizo esebenza ngokuhweba.
Njengendawo esiphikisayo, sikhulise inani lemininingwane yamahhala esatshalaliswa ngokukhula kwethu okukhulu kuzethameli ezafinyelelwa eScotland nasemhlabeni jikelele ngewebhusayithi yethu nakwimithombo yezokusakaza, ikakhulukazi emsakazweni. Iminikelo yethu ekubonisaneni nomphakathi okune nokushicilelwa kwethu kwiJenali Ukuhlukumeza ngokocansi nokuphoqelela zenziwa mahhala. Intuthuko enkulu kube ukwethula kwethu Umhlahlandlela Wabazali Wamahhala Wezithombe Zobulili Ezingcolile Ze-inthanethi. Le ncwajana elula enamakhasi ama-4 manje isiza abazali emhlabeni jikelele.
Umbiko wonyaka ka-2017-18
Kuthatha imisebenzi yokuqeqesha nokuthuthukiswa ukuphakamisa amazinga amakhono weqembu le-TRF ukuqinisekisa ukuthi bangakwazi ukuletha lezi zimpande zomsebenzi ezihlukahlukene
Siqhubeke sisebenzisa isibonelelo 'sokutshala izimali' kusukela kwi-Big Lottery Fund ukuthuthukisa nokuhlola izinto zokufunda zekharityhulam ukuze zisetshenziswe ngabafundisi bamabanga aphansi nabasekondari ezikoleni zikahulumeni.
I-TRF yaqhubeka yokwandisa ubukhona bayo emfundweni yezocansi, ukuvikeleka kwe-intanethi kanye nezinsimu zokuqwashisa okubi kwe-porn, ukuya ezinkomfeni ze-12 nezenzakalo eScotland (ngonyaka odlule i-5), i-3 e-England (ngonyaka odlule i-5) no-2 e-USA kanye nomunye ngamunye eCroatia naseJalimane.
Phakathi nonyaka sasebenza nabantu abangaphezulu kwe-3,500 ngabanye futhi sithunyelwe mayelana nomuntu / amahora we-2,920 wokuxhumana nokuqeqesha.
Ku-Twitter esikhathini esivela kuJulayi 2017 kuya kuJuni 2018 sithole ama-tweet we-174,600, kusukela ku-48,186 ngonyaka odlule.
Ngo-Juni 2018 senezele i-GTranslate kuwebhusayithi, sinikeza ukufinyelela okugcwele kokuqukethwe kwethu ngezilimi ze-100 ngokuhumusha komshini.
Ngonyaka senza izinguqulo ze-5 zezindaba ezivuzayo futhi uhlu lwethu lokuposa lwaba yi-GDPR ehambisanayo. Phakathi nonyaka sashicilele okuthunyelwe kwe-blog ye-33 ehlanganisa imisebenzi ye-TRF kanye nezindaba zamuva mayelana nomthelela wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi emphakathini. Lokhu kwakuyi-blogs ye-2 ngaphezulu kunonyaka odlule. Sine-athikili eyodwa eshicilelwe emaphephandabeni abuyekezwe ngontanga.
Ngonyaka we-TRF waqhubeka nokufaka abezindaba, avela kwizindaba zephephandaba i-21 e-UK nakwamanye amazwe (ngonyaka odlule i-9) kanye nakweyithelevishini ye-BBC eNyakatho Ireland. Sifake ku-interview ze-4 yomsakazo.
UMary Sharpe waqhubeka nomsebenzi wakhe njengosihlalo weKomidi Lezobudlelwane Bomphakathi kanye Nokumemezela eNhlanganweni Yezokuthuthukiswa Kwezempilo Ezocansi (SASH) e-USA.
I-Reward Foundation inikeze izimpendulo kwi-UK Yokubonisana Nezinhlelo Zokuphepha Ze-Green Paper. Siphinde sithumele ithimba le-Internet Safety Strategy eMnyangweni we-Digital, Amasiko, iMidiya kanye neMidlalo ngezichibiyelo ezihlongozwayo kuMthetho Wezomnotho Wezinombolo.
Sifinyelele iRoyal College of General Practitioners Accreditation ukuletha izifundo zosuku olulodwa kubaqeqeshi bezempilo njengengxenye yezinhlelo zabo zokuqhubeka nokuthuthukiswa kochwepheshe. Ama-workshops e-CPD athunyelwe emadolobheni we-4 UK.
I-TRF yaqhubeka nokuletha izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ezilimaza ukuqeqesha ukuqwashisa ezikoleni, ochwepheshe kanye nomphakathi jikelele. Sisebenzisana ngokuxhasa uhlelo lwesifundo sezikole lokubonisa i-Wonder Fools Umphumela we-Coolidge e-Traverse Theater.
I-CEO yethu noSihlalo bajoyina uhlelo lokuqeqesha i-Good Ideas Catalyst e-Edinburgh ngezinsuku ze-3.
Sinike inani lama-1,120 umuntu / amahora wokuqeqeshwa kwamahhala, kuphela nje ngezansi kwe-1,165 yonyaka odlule. I-TRF inikeze izinsizakalo zokuqeqeshwa nezinsiza zamahhala kumaqembu alandelayo:
Sinikeze abazali nabachwepheshe be-310 emaqenjini omphakathi, wehla ku-840 wonyaka odlule
I-CEO yenziwe phambi kwabantu abangu-160 ezilalelini ze-TV kwi-BBC Northern Ireland. Ingxenye yamaminithi we-10 yasakazwa ku-Nolan Show, uhlelo olulinganisiwe kakhulu eNyakatho ye-Ireland
Sinikeze abantu be-908 emaqenjini aqeqeshiwe nakwezemfundo ezinkomfa nasezenzweni eScotland, eNgilandi, eU.SA, eJalimane naseCroatia, kusukela ngonyaka ka-119 wonyaka odlule
Sinikeze umfundi oyunivesithi ukubekwa kokuzithandela kanye nokuhlukanisa inkambo yokudweba imidwebo ehlanganisa i-15 undergraduates ngaphezu kwe-semester ephelele.
Umbiko wonyaka ka-2016-17
NgoFebhuwari 2017 sithole isamba esingu-£ 10,000 'Investing in Ideas' esivela kwi-Big Lottery Fund ukuthuthukisa izinto zokwakha ikharikhythi yokusetshenziswa kwabafundisi basezifundeni eziyisisekelo nezifunda ezikoleni.
Kusuka ku-1 June 2016 kuya ku-31 May 2017 umholo we-CEO ubhalwe phansi yi-grant evela ku-UnLtd Millennium Award 'Build' 'eyinikezwa yi-£ 15,000 eyakhokhelwa yona.
UMary Sharpe wagcwalisa ukuqokwa kwakhe njengeScholar Visiting University of Cambridge ngoDisemba 2016. Ubuhlobo noCambridge basekela ukuthuthukiswa kwephrofayli yocwaningo lwe-TRF.
I-CEO kanye noSihlalo baqeda uhlelo lwe-Accelerated Social Innovation Incubator Award (SIIA) lokuqeqeshwa kwebhizinisi ku-Melting Pot.
I-TRF yaqhubeka yokwandisa ubukhona bayo emfundweni yezocansi, ukuvikeleka kwe-intanethi kanye nezinsimu zokuqwashisa okubi kwe-porn, ukuya kwizingqungquthela ze-5 nezenzakalo eScotland, i-5 e-England nabanye abase-USA, i-Israel ne-Australia. Ngaphezu kwalokho, amaphepha amathathu abuyekezwa ngontanga abhalwe ngamalungu e-TRF ashicilelwe ezincwadini zemfundo.
Ku-Twitter kusukela ngo-July 2016 kuya ku-Juni 2017 sikhulise inani lethu labalandeli kusuka ku-46 kuya ku-124 futhi sithumele ama-tweets we-277. Zifeze ukubonakala kwe-48,186 tweet.
Sithuthela iwebhusayithi www.rewardfoundation.org ukuya enkonzweni entsha yokubamba ngejubane elithuthukisiwe kakhulu kubo bobabili abasebenzisi kanye nomphakathi. Ngo-Juni 2017 sithumelele Izindaba Zomvuzo, i-newsletter esiyihlose ukushicilela okungenani izikhathi ezingu-4 ngonyaka. Phakathi nonyaka sashicilele okuthunyelwe kwebhulogi ye-31 ehlanganisa imisebenzi ye-TRF kanye nezindaba zakamuva mayelana nomthelela wezithombe zocansi ze-intanethi.
Phakathi nonyaka i-TRF yaqala ukufaka abezindaba, ivela emaphephandabeni e-9 e-UK nakwe-TV ye-BBC eNyakatho Ireland. Sifake emibuzweni emibili yomsakazo eningi nakumavidiyo we-intanethi ashicilelwe i-OnlinePROTECT.
UMary Sharpe wabhala isahluko esinesihloko I-Flow Flow ye-intanethi kanye nokuhlukunyezwa ngokocansi noSteve Davies ngencwadi ethi 'Ukusebenzisana Nabanye Abaye Benza Amacala Ezocansi: Umhlahlandlela Wabadobi'. Yanyatheliswa nguRoutledge ngoMashi 2017.
UMary Sharpe waba yisihlalo seKomidi Yobudlelwane Bomphakathi Nezokumemezela eNhlanganweni Yezokuthuthukiswa Komzimba Wezocansi (SASH) e-USA.
I-Reward Foundation inikeze izimpendulo zokubonisana eSikoleni SaseCcotland sokuvimbela nokuqeda udlame olubhekiswe kwabesifazane namantombazane, ikusasa lekharityhulam yomuntu siqu kanye nezefundo zocansi ezikoleni zaseScotland kanye nophenyo lwePhalamende laseCanada mayelana nemiphumela yezempilo yezocansi ezingcolile kubantu abasha.
I-Reward Foundation ibhalwe njengomthombo onokuxhumanisa nekhasi lethu lasekhaya ku-National Action Plan Yezokuphepha Kwe-Inthanethi Yezingane Nabantu Abasha eshicilelwe nguHulumeni waseScotland. Sibambe iqhaza kwi-Working Party yase-UK ePhalamende Yomndeni, Lords kanye neCommons Family & Child Protection Group imizamo yokusiza ukwamukelwa koMthethosivivinywa Wezomnotho Wedijithali ngePhalamende lase-UK.
Sinikeze amahora angu-1,165 wokuqeqeshwa kwamahhala, kusuka ku-1,043 ngonyaka odlule. Sinikeze izinsizakalo zokuqeqeshwa nolwazi kumaqembu alandelayo:
Abafundi be-650 ezikoleni eScotland
Abazali be-840 nabachwepheshe emacembu omphakathi
Abantu abangu-160 ezilalelini ze-TV kwi-BBC Northern Ireland. Ingxenye yamaminithi we-10 yasakazwa ku-Nolan Show, uhlelo olulinganisiwe kakhulu eNyakatho ye-Ireland
I-119 emaqenjini aqeqeshiwe nama-academic ezinkomfa nasezenzweni eScotland, eNgilandi, e-USA nase-Israel
Sinikeze izikhundla zokuzithandela ze-4 kubafundi besikole naseyunivesithi.
Umbiko wonyaka ka-2015-16
Ukwenza ngcono ukusebenza ngokwezimali kwezezimali ngokufaka izicelo zezibonelelo bese uqala ukuhweba kwezebhizinisi
Ukuthuthukisa ubudlelwane nabasebenzi abangaba khona eScotland ngokuxhumana
Ukusungula uhlelo lokufundisa ezikoleni besebenzisa imodeli yesayensi yomjikelezo womjikelezo wobuchopho nokuthi uxhumana kanjani nemvelo
Ukwakha iphrofayli kazwelonke neyomhlaba wonke ukwenza i-TRF ibe 'inhlangano' yokuthembeka yabantu nezinhlangano ezidinga ukwesekwa endaweni yezingcolile zobulili ze-intanethi zilimaza njengendlela yokuthuthukisa ukuqonda komphakathi ukwakha ukuqina ukucindezeleka
Ukwandisa ukuxhumana kwethu kwewebhu nokuxhumana kwezenhlalo ukwakha umkhiqizo wethu phakathi kwezilaleli eScotland nasemhlabeni jikelele
Isicelo esiphumelele senziwa kwa-UnLtd ngomklomelo we- “Build It” wama- £ 15,000 wesibonelelo sokukhokhela uMary Sharpe umholo wonyaka kusuka ngoJuni 2016. Ngenxa yalokho ngoMeyi 2016 uMary wasula njengomphathiswa wesisa futhi washintshela endimeni yeChief Isikhulu Esiphezulu. UDkt Darryl Mead wakhethwa yiBhodi njengoSihlalo omusha.
Umsebenzi oholelekile kaMary Sharpe ukuthuthukisa inethiwekhi yabahlanganyeli abangahle bakwazi. Imihlangano yayiqhutshelwa nabameleli bamajele abahle, ama-Positive Futures ?, i-Scottish Catholic Education Association, iLothians Sexual Health, i-NHS Lothian Healthy Respect, i-Edinburgh City Council, iScottish Health Action on Izinkinga Zotshwala Nonyaka Kababa.
UMary Sharpe wakhethwa njengeScholar Visiting University of Cambridge ngoDisemba 2015. UDarryl Mead wamiswa njengomuntu ohloniphekile woCwaningo lwe-UCL. Ubuhlobo nalezi zunivesithi basekela ukuthuthukiswa kwephrofayli yocwaningo lwe-TRF.
UMary Sharpe wagcwalisa ukuqeqeshwa kwakhe ngokusebenzisa uhlelo lwe-Social Innovation Incubator Award (SIIA) ku-Melting Pot. Wabe esejoyina uhlelo lwe-Accelerated SIIA, kanye nelungu leBhodi uDkt Darryl Mead.
I-TRF ithuthukise ukutholakala kwenkambu yokuvikelwa kwe-intanethi kanye nezinsizakalo zokulimala ezingcolile zobulili, ukuya ezinkomfa ze-9 UK.
Amaphepha abhaliwe ngamalungu e-TRF avunyelwe ukuba avezwe eBrighton, eGlasgow, Stirling, eLondon, Istanbul naseMunich.
Ngo-Februwari 2016 siqalise ukuphakelayo kwe-Twitter @brain_love_sex futhi sandisa iwebhusayithi kusuka ku-20 kuya ku-70. Siphinde sithatha le website kusuka kubathuthukisi.
UMary Sharpe wabhala isahluko esinesihloko I-Flow Flow ye-intanethi kanye nokuhlukunyezwa ngokocansi noSteve Davies ngencwadi ethi 'Ukusebenzisana Nabanye Abaye Benza Amacala Ezocansi: Umhlahlandlela Wabadobi'. Izoshicilelwa nguRoutledge ngoFebruwari 2017.
UMary Sharpe wakhethwa ebhodini leNhlangano ukuze kuthuthukiswe impilo yezocansi (SASH) e-USA.
I-TRF ithumele izimpendulo ku-Inquiry yase-Australia Senate Ukulimaza okwenziwe izingane zase-Australia ngokufinyelela ezingcolile zobulili ezingcolile kuyi-intanethi kanye nokubonisana kukahulumeni wase-UK Ukuphepha kwabantwana ku-intanethi: Ukuqinisekisa ubudala bezithombe zobulili ezingcolile.
Siqale ukuletha izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ukulimaza ukuqeqesha ukuqwashisa ezikoleni zaseScotland ngokuhweba.
I-TRF ithole isibonelelo se-£ 2,500 njengemali yokuxhasa imbewu yokwakha iwebhusayithi enkulu yentsha. Kuzokwenziwa ngokuthuthukiswa nabantu abasha abavela ezilalelini ezihlosiwe.
Sinikeze amahora angu-1,043 wokuqeqeshwa kwamahhala, kusuka ku-643 ngonyaka odlule.
Sinikeze izinsizakalo zokuqeqeshwa nolwazi kumaqembu alandelayo:
Othisha be-60 ekuqeqesheni okusemsebenzini e-Edinburgh City Council
Iziphathimandla zezempilo ze-45 ze-NHS Lothian
Abadlali be-3 be-Wonder Fools eGlasgow
Amalungu e-34 weNational Association for the Treatment of Abusers
Izihambeli ze-60 ku-ConferenceProtect Conference eLondon
Izihambeli ze-287 e-International Congress of Technology Addiction e-Istanbul, eTurkey
Abaculi be-33 nabafundi bezobuciko e-Royal College of Art eLondon
Amalungu e-16 we-Melting Pot, ngokubambisana noDkt. Loretta Breuning
Abasebenzi be-43 esikhungweni sempilo yezocansi e-Chalmers e-Edinburgh
Izihambeli ze-22 eNgqungqutheleni ye-DGSS yokuPhenywa kwezesayensi yezenhlalakahle eMunich, eJalimane
Abafundi be-247 esikoleni sikaGeorge Heriot e-Edinburgh Sanikeze ukuhlinzekwa kwamavolontiya akwa-3 kubafundi besikole nabamanyuvesi.
Umbiko wonyaka ka-2014-15
Uchungechunge lwezinkulumo ezifanekiselwe izethameli ezakhiwe zakhiwe nguMary Sharpe noDarryl Mead bebeka indlela umjikelezo womvuzo wobuchopho usebenza ngayo. Lokhu kucubungula inqubo yokulutha ukugqilaza, kuchaza indlela engavamile kakhulu futhi ichazwe ngendlela indlela izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ezingaba ngayo umlutha wokuziphatha. Izilaleli ezifinyelelwe zichazwe ngezansi. UMary Sharpe ukhulume nabasebenzi base-150 abasebenzela uhulumeni waseScotland.
IBhodi lavumelana nomthethosisekelo.
IBhodi yavuma abaphathi behhovisi.
Bese iBhodi yavuma uhlelo lwebhizinisi.
I-Akhawunti Yobhangi Yomgcinimafa yasungulwa ngokungekho kwemali ngeScottish Bank enkulu.
Ubunikazi bokuqala kanye ne-logo bamukelekile.
Isivumelwano sisungulwe ukukhokhiswa kwencwadi Ubuchopho bakho ku-Porn: Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kanye neSayensi eVukayo yokuMlutha ukuba unikezwe nguMlobi kuya ku-Reward Foundation. Ukukhokha kokuqala kokukhokhwa kwemindeni kwamukelwe.
UMary Sharpe njengoSihlalo uzuze indawo ohlelweni lokuqeqeshwa kwe-Social Innovation Incubator Award (SIIA) e-The Melting Pot. Umklomelo ubandakanya unyaka wokusetshenziswa kwamahhala kwesikhala eMelting Pot.
UMary Sharpe unqobe £ 300 for The Reward Foundation emncintiswaneni we-SIIA.
UMary Sharpe wafaka isicelo futhi wawina umklomelo we- £ 3,150 kwizinga le-1 lezezimali kwaFirstPort / UnLtd ukusivumela ukuthi sakhe iwebhusayithi esebenzayo. Imali evela kulo mklomelo ayitholakalanga kuze kube unyaka wezimali olandelayo.
Imakethe yokuthengisa yayibophezelekile ekuthuthukiseni iwebhusayithi kanye nesethi eyinkimbinkimbi yesithombe sezinkampani.
Sinike amahora angu-643 wokuqeqeshwa kwamahhala.
Saqeqesha ochwepheshe abalandelayo: izikhulu ezingama-20 zezempilo yezocansi ze-NHS Lothian, usuku lonke; Ochwepheshe bezempilo abangama-20 eLothian & Edinburgh Abstinence Programme (LEAP) amahora amabili; Ochwepheshe bezobulungiswa abangama-2 eScotland Association for the Study of Offending amahora ayi-47; Abaphathi abangama-1.5 ePolmont Young Offenders Institution amahora amabili; Abeluleki abangama-30 nochwepheshe bokuvikelwa kwezingane egatsheni laseScotland leNational Association for the Treatment of Abusers (NOTA) amahora angu-2; Bangu-35 abafundi bebanga lesithupha eGeorge Heriot's School amahora angu-1.5.
Sinikeze izikhundla zokuzithandela ze-3 kubafundi besikole naseyunivesithi.